Communicative English Course (Level – 1 to 6) | LAPG
Communicative English Course (Level - 1 to 6)
Level – 1 (Class 1)
Day - Sat & Sun
Level – 1 (Class 2)
“Communicative English Course”
LA Professionals Group ရဲ့ CEC တန်းခွဲတွေဟာ ဖွင့်တဲ့အတန်းတိုင်းမှာသတ်မှတ်လူဦးရေ ပြည့်ပြီးတော့ သင်တန်းသားများ နှစ်သက် ကျေနပ်မှုများလည်းရရှိနေပါတယ်။ ဘာကြောင့်ပါလဲ။
– စနစ်တကျ လေ့ကျင့်နိုင်ရန် ပြင်ဆင်ထားတဲ့ standard English။
– တစ်ဦးချင်းစီကိုသေချာ ဂရုတစိုက်သင်ကြားပေးနိုင်သော လူဦးရေ ကန့်သတ်ထားတဲ့ သင်တန်းများ။
-ကိုယ်ပိုင် account & password ထားရှိပေး ထားတဲ့ နိုင်ငံတကာတက္ကသိုလ်တွေမှာ အသုံးပြုနေတဲ့ Learning Management System။
– Listening skills နှင့် pronunciation များအတွက် native speaker များရဲ့အသံဖိုင်များ ဖြင့် ထိထိရောက်ရောက် သင်ကြားပေးနေတာတွေကြောင့်ဘဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို လက်တွေ့ကျကျ အသုံးပြုတတ်မြောက်လိုသူများနှင့် စနစ်တကျ တတ်မြောက်လိုသူများ အတွက် သင်တန်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်မှာ IELTS ဖြေမယ့်သူများရော/ လုပ်ငန်း ခွင်ဝင်မယ့်သူများအတွက်ပါအသုံးဝင်မည့် သင်တန်းဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ် skill တွေကို တိုးတက်လာအောင် လေ့ကျင့်ပေးသွားမှာလဲ –
ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ Oxford University မှသင်ရိုး၊ Curriculum and Syllabus များ ကိုသင်ကြားမည့် အပြင် လိုအပ်တဲ့သင်ခန်းစာများကိုလည်း အခြားနိုင်ငံတကာ အဆင့်မီသင်ရိုးများမှ ကောက်နုတ်ပြီး ထပ်လောင်းဖြည့်စွက်ထည့်သွင်းသင်ကြားသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်တွေ့အသုံးချနိုင်မယ့်သင်ခန်းစာများ၊ သင်ကြားမှုပုံစံများနဲ့သင်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာကျောင်းသားများ နဲ့ သင့်တော်မည့် Level ၆ ခု ခွဲခြားထားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Speaking သီးသန့်လေ့ကျင့်ချင်သူများအတွက် Conversation Club ကိုလည်းဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်။
5. Level5(Intermediate I)
6. Level6(Intermediate II)
7. Conversation Club
Level တစ်ခုကို ၆ ပတ်ကြာမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။
သင်တန်းကြေး – ၆ သောင်းကျပ်
16 Jan – 21 Feb
18 Jan – 25 Feb
9 Jan – 14 Feb
သင်ကြားပေးမယ့်ဆရာ/မ တွေကတော့ နိုင်ငံတကာသင်ကြားမှုအတွေ့အကြုံရှိသူများ၊ နိုင်ငံခြားတက္က သိုလ်များမှာ ပညာတော်သင်ဆုဖြင့် သင်ကြားရေးတွင်မဟာတန်း (Master Degree) အောင်မြင်ထားသူ များ၊ သင်ကြားမှုအတွေ့အကြုံ ၈ နှစ် နှင့်အထက်ရှိသူများ၊ လက်ရှိတွင်တက္ကသိုလ်များ INGO များနှင့်လက် တွဲ လုပ်ဆောင်နေသူများဖြစ်ပါတယ်။
(ဆရာတွေရဲ့ profile ကို ပုံတွေရဲ့အောက်မှာတင်ပေးထားပါတယ်)
: enquiry@lapg.info မှတဆင့် ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။